एउटा बाख्रो २५ लाख मूल्यमा बिक्यो, के छ यसमा खास विशेषता ? - ramechhapkhabar.com
एउटा बाख्रो २५ लाख मूल्यमा बिक्यो, के छ यसमा खास विशेषता ?
एउटा बाख्राको मूल्य कति पर्छ ? २० हजार ? ५० हजार ? अथवा एक लाख ? नेपालमा त एक लाख सायदै पर्ला । तर एउटा बाख्राको मूल्य २५ लाख भन्दा पत्याउनु हुन्छ ? पत्यार लाग्दैन नि। तर अस्ट्रेलियामा एउटा बाख्रो २१ हजार डलर अर्थात २५ लाख नेपाली रुपैयाँ मूल्यमा बिकेको छ। बुधबार न्यूसाउथ वेल्समा एक सेलमा यो बाख्रोलाई एन्ड्रयु मोसलीले किने।
अस्ट्रेलियामा यति महंगोमा यसअघि कुनै पनि बाख्रा खरिद बिक्री भएको थिएन। एबीसी न्यूजका अनुसार मोसलेले आफूले किनेको यो बाख्रो निकै स्टाइलिस भएको बताएका छन्। यो बाख्रोको नाम माराकेश हो।
यसअघि अस्ट्रेलियामा सबैभन्दा महंगो बाख्रो १२ हजार डलरमा बिकेको थियो। यो बाख्रो गत महिना मात्र बिकेको थियो। माराकेशलाई किनेपछि मोसले निकै खुसी देखिएका थिए। उनले भने ‘यो धेरै शानदार जनावर छ यसको चाल पनि निकै राम्रो छ। कद काठीमा धेरै ठूलो नभए पनि मलाई लाग्छ यो निकै छिटो हुर्किएको छ। यसका मसल पनि शानदार छन्।’
गत वर्ष मोसलेले नै अर्को एउटा बाख्रो ९ हजार डलरमा किनेका थिए। मोसले भन्छन् ‘यस्ता जनावरको संख्या निकै कम छ। एकपटक हातबाट उम्कियो भने फेरि सजिलै पाइँदैन। पाँच वर्षमा यिनीहरुको मासुको माग निकै बढेको ।’ मारकेशको जन्म क्विन्सल्याण्ड सीमा नजिकै रेंगेल्याण्ड फर्ममा भएको थियो।
मोसलेले सानैदेखि बाख्राको व्यवसाय गरिरहेका छन् । उनी भन्छन् ‘यो जरुरी हुँदैन कि सधैं ठूलो जनावर मात्रै राम्रो होस्। माराकेशको बारेमा राम्रो कुरा यो हो कि यो अहिले निकै शानदार देखिन्छ। यसलाई तपाइँ धेरै राम्रो प्रजाति भन्न सक्नुहुन्छ। यो क्षेत्रमा कैयौं पटक मौसम धेरै खराब हुन्छ। यस्तो अवस्थामा योजति स्वस्थ र शानदार जनावर भेट्नु सजिलो छैन। पश्चिमी देशमा यस्तो प्रजाति सजिलै पाइँदैन।’